आज २०७७ भदौ १० गते बुधबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस – Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ १० गते बुधबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७७ भदौ १० गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ ।
जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यमा अधिक सफलता मिल्नेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । स्वादिष्ट भोजनपनि पाईनेछ ।
आज अकस्मात् धन सम्पत्ति हात पर्नेछ । धर्म कर्म, परोपकार, समाजसेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्नेछ । शुभकार्यको चर्चापनि चल्नेछ ।
बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ । बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ ।
नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । रमणीय र सुखद् यात्राको योजना बन्ला ।
आज इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । ठुला व्यक्तिले तपाईंका मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । धनार्जनका नयाँ योजना र स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् ।
आज मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कार्यहरू पुरा हुनेछन् । पारिवारिक साथ र सहयोग मिल्नेछ ।
आज काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । आकस्मिक धन लाभपनि हुनेछ । महिला वा मित्रबाट विशेष साथ र सहयोग मिल्नेछ ।
गरेको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । पारिवारिक समस्या आइपर्ला । विचार गरेर निर्णय लिनु उचित होला ।
आज आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । साहित्यिक क्षेत्रमा रूची बढ्नेछ । पारिवारिक साथ, प्रेम, सद्भाव र स्नेह बढ्नेछ ।
शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ ।
आत्मिक सन्तुष्टि मिल्नेछ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । तिर्थाटनको योगपनि छ ।
आजको दिन प्रतिकूल समयछ, संयम रहनु होला । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने र प्रेममा मनमुटाव आउला ।
दाङमा गरिन १० बर्षकी बालिकाले आ’त्मह’त्या
दाङ ६, भदौ, तुलसीपुरमा १० बर्षकी बालिकाले झु’ण्डीएर आ’त्मह’त्या गरेकी छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ दमारगाउँ निबासी नन्द राम केसीकी छोरी १० बर्षकी जानकी केसी घरको तलामा झु’ण्डीएर आ’त्मह’त्या गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । बालिकाको श’व पोष्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको श’व गृहमा राखिएको । बालिका शुक्रबार अपरान्ह साढे ४ बजे […]
भदौ १९, काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले घरदैलो (होम डेलिभरी) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा छ । यससँगै आजदेखि घरदैलो सेवा समेत सञ्चालनमा आएको छ । सेवा सञ्चालन गर्दा तोकिएको मापदण्ड लागू नभएमा कडा कारवाही हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । घरदैलो सेवाको आजदेखि नै अनुगमन शुरुआत भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए […]
काठमाडौं, भदौ १८ बिहीबार देशभर कोरोनाका १२२८ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा सो संख्याका संक्रमित थपिएको जानकारी दिए। यो अहिलेसम्मकै बढी कोरोना संक्रमितको संख्या हो । यसअघि गत आइतबार एकैदिन १२२१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। यीसहित हालसम्म संक्रमितको संख्या ४२ हजार ८ सय ७७ पुगेको […]
उनी श्रीमतीलाई भात खुवाउन गएका थिए, उठाउन खोज्दा त उनमा सा’स रहेनछ’ [मार्मिक घटना]